umshini wemishini yekhofi izithombe China Manufacturer
Incazelo:I-Coffee Printer Indonesia,Imishini Yamakhofi,I-Bagel Coffee Printer
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > I-Selfie Coffee Printer > umshini wemishini yekhofi izithombe
I- printer ikhofi ye-indonesia isetshenziselwa ukuphrinta izithombe ekudleni.Inezinhlobonhlobo ezingu-6 ezingaprinta izithombe ezimibalabala futhi ezikhanyayo.Umphumela wokuphrinta ucacile.Umshini ungashintsha umsebenzi wezincwadi.
Imishini yomshini wekhofi uhlobo olusha lwephrinta ye-inkjet ecacile yokushicilela okunamandla, isebenza njengeprinta yezinkinobho zendabuko, yenza ukuphrinta ngokunyathelisa ngokuqondile kwe-inkjet, kodwa ngenxa yokuphakamisa kwayo i-flatbed, iphinde iphrinta cishe kuzo zonke izinhlobo zezinto ngaphandle kwamaphepha , njengamaqebelengwane, izinkuni, izinsimbi, iplastiki, isikhumba, nezinye izingubo, indwangu, njll.
I-bagel coffee printer ifaneleka ngekhekhe, isinkwa, ibhisikidi, ama-macaroni ... izinhlobo zokudla. Ngaphandle kwalokho, futhi kungasebenza ngendwangu, igobolondo lefoni, ikhadi le-PVC, i-DVD, ibhodlela, isikhumba, insimbi, ipeni nokunye. Izindleko ezilahlekile futhi zisebenza kahle.
I-semi-Automatic ikhomishini yemishini yekhofi yemishini
Iphrinta ye-Digital ne-Automatic ikhofi ye-coffee Xhumana Nanje
I-Latte Art Self Latte Coffee Printer Xhumana Nanje
I-Coffee Printer Indonesia Imishini Yamakhofi I-Bagel Coffee Printer I-Coffee Printer India I-Coffee Printer Ces I-Coffee Printer eCanada I-Coffee Printer 6 Izinkomishi I-Coffee Printer Amazon